Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Goob-joogayaasha Caalamiga Ah Ee Doorashooyinka Somaliland - Xogside-news Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALILAND NEWS Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo xafiiskiisa ku qaabilay goob-joogayaasha caalamiga ah ee doorashooyinka...
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo xafiiskiisa ku qaabilay goob-joogayaasha caalamiga ah ee doorashooyinka Somaliland
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madax ka socotay goob-joogayaasha caalamiga ah ee doorashooyinka.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland garyaqaan Aadam Xaaji Cali Axmed, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay masuuliyiin sare oo ka socday, goob-joogayaasha caalamiga ah ee doorashooyinka goleyaasha deegaanka iyo wakiillada oo uu hoggaaminayay Michael Walls oo ay wehelinayeen, Dr Jaamac Muuse Jaamac iyo Dr Amaal Cali oo ka mid ah goob-joogayaasha doorashada.
Guddoomiyaha iyo waftiga ayaa isla gorfeeyay habsami-u-socodka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee 31 May loo dareerayo, caqabadaha laga soo gudbay iyo sida ay ahmiyad weyn u leedahay in doorashadu u qabsoonto si hufnaan leh, oo ay isla ogolyihiin dhinacyada ku tartamaya.
Guddoomiye Aadam Xaaji Cali ayaa xubnaha waftiga warbixin ka siiyay sida ay hay’adda garsoorku ugu diyaar garowday in ay xaliso cabasho kasta oo soo gaadha, isagoo xusay in uu guddoomiyayaasha maxkamadaha heerarka kala duwan ee dalka faray, in ay taxadar dheeraad ah muujiyaan.
Guddoomiyaha ayaa faahfaahin ka siiyay xubnaha waftiga xeerka doorashooyinka iyo dariiqyada sharci ee u banaan dhinacyada doorashada ku loolamaya haddii ay timaado cabasho la xidhiidha hannaanka doorashadu.
Masuuliyiinta ka socday goob-joogayaasha doorashada ayaa sheegay in ay soo dhawaynayaan, dedaalada ay wadaan garsoorka dalku, iyagoo xusay in ay horseedayso daah-furnaanta doorashada, korna u qaadayso kalsoonida axsaabta qaranka.
Ugu danbayn guddoomiyuhu waxa uu xubnaha waftiga uga mahad-celiyay doorka ay goob-joogayaasha caalamiga ahi kaga jiraan hab-sami-u-socodka doorashada dalka ka qabsoomaysa 31 May.
Previous articleHoggaanka sare ee Saddexda Xisbi Qaran iyo Beesha Caalamka ayaa iska xog wareystay habsami u socodka hawlaha doorashooyinka
Next articleDanjiraha cusub ee Dowladda Hindiya u soo magacoday Somaliya oo maanta dalka soo gaadhay